Al-Shabaab oo soo bandhigay askari ka mid ah ciidamada DKMG oo ay qabteen +Sawiro – SBC
Al-Shabaab oo soo bandhigay askari ka mid ah ciidamada DKMG oo ay qabteen +Sawiro
Xoogaga Shabaabka ee ka dagaalamaya magaalada Muqdisho qaybo ka mid ah ayaa maanta saxaafada u soo bandhigay askari ka mid ah ciidamada dawlada KMG Soomaaliya oo ay sheegeen in ay ku qabteen dagaaladii ka dhacay maanta agagaaraha Isgoyska Fagax.
Shir jaraa’id oo uu ku qabtey xarunta warshadii hore ee Baastada ee degmada Hurwaa afhayeenka xarakada Al-Shabaab Sheekh Cali Dheere ayuu ku sheegay in askarigan ay qabteen isagoo dhaawac ah, waxaana uu sheegtey in sidoo kale ay dileen kuwa kale.
Cali Dheere ayaa sheegay is bedelka farsamada dagaalka uu ku socdo qaab guul ah, isagoo tibaaxay in dagaaladii maanta ay qasaare ku gaarsiiyeen Taangiyada AMISOm ay wateen.
Askariga ay Al-Shabaab soo bandhigeen oo ku labisnaa tuutaha ciidamada dawlada KMG ayaa magaciisa lagu sheegay Calas Ibraahim oo da’diisu tahay 32 sano, iyadoo la xusey in uu ka mid ahaa ilaalada gaarka ah mid ka mid ah taliyeyaasha ciidamada dawlada oo lagu magacaabo Gacmma-Dulle, kaasi oo hogaaminayey ciidamadii ka dagaalamayey agagaaraha Fagax & Hotel Ramadaan.
Lama oga xukunka ay ku qaadi doonaan Shabaabku maxbuuskan oo ah kii ugu horeeyey ee ay soo bandhigaan tan iyo markii ay ka baxeen furimihii dagaalka ee magaalada Muqdisho qaybo ka mid ah.